Cindezela ukwakha iworkshop - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
IJera fiber inemishini engaphezu kwengu-10 yokunyathela. Ubuchwepheshe obucindezelayo inqubo yokufaka ishidi eliyinsimbi kwifomu elingenalutho noma lekhoyili kumshini wokucindezela, bese ulikhubaza (ngokugoba, ukugoqa, ukufaka embossing, ukufaka imali njll) ukufanisa usayizi nokuma kofa, nezinto bese igcina lolo hlobo unomphela. Senza i-R & D futhi sithuthukise imikhiqizo ehlobene nokukhiqizwa yilo buchwepheshe.
Sakha izingxenye zensimbi zokulandela imikhiqizo ku-stamping press workshop:
-Fiber optic ihange izibopho for sibalo 8 ikhebula
-I-Fiber optic boxed
-Fiber Ukuvalwa optic
Izixhumi zokubhoboza i-voltage ephansi
Izibopho ze-Anchor zekhebula likagesi
-Flat drop wire ngocingo kanye nxazonke wire ngocingo
-Ibhande lensimbi elingenasici
-Fiber optic cable slack bracket
-Okunye iziqeshana, thimbles, iziphanyeko
Izinto zokusetshenziswa zomshini wokunyathela ngokuvamile ziyikhoyili yensimbi, njengensimbi engagqwali i-SUS 201, i-SUS 304, i-Carbon steel, i-Aluminium, iCopper, i-Brass njll.
Zonke izinto zihlolwa ngokuya ngamazinga we-ISO 9001: 2015, nezidingo zangaphakathi ze-JERA.
Ngale mishini yokunyathela, iJera fiber inamandla okucwaninga nokuklama imikhiqizo emisha nokwenza eminye imikhiqizo edingekayo yamakhasimende ngokuya ngamabanga ethu amanje. Kwenza iJera fiber ibe nohlu olubanzi lomkhiqizo ukwanelisa izidingo ezihlukile zamakhasimende. Futhi imikhiqizo yeJERA iba nokuncintisana kakhulu ezimakethe
Ngokusebenzisa lobu buchwepheshe bokwakha, singakhiqiza izingxenye zensimbi sisodwa. Yonga izindleko futhi yenza intengo yeyunithi yemikhiqizo ibe nokuncintisana, futhi singakwazi ukulawula ikhwalithi kalula ngokwethu.
Umsebenzi wethu ukuhlinzeka amakhasimende ethu ngesisombululo sonke sokwakha inethiwekhi yezokuxhumana. Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi ngokubambisana okuqhubekayo, ngethemba ukuthi singakha ubudlelwano obunokwethenjelwa, besikhathi eside.